Jereo ny karazana fizahan-tany any Espana | Vaovao momba ny dia
Rehefa mieritreritra fizahantany isika dia tsy mieritreritra hoe misy karazany samihafa, satria tsy ny rehetra no mandeha amin'ny antony mitovy. Raha ny marina dia misy faritra izay manana karazana fizahantany manokana izay ifantohan'izy ireo mba hahazoana tombony betsaka amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Izany no antony hijerentsika ireo karazana fizahantany izay hitantsika any Espana.
Espana dia tsy isalasalana fa firenena fizahan-tany, izay mahasarika olona an'arivony isan-taona maniry hankafy zavatra samihafa, manomboka amin'ny gastronomie ka hatrany amin'ny habaka voajanahary, morontsiraka na ny kolontsainy. Jereo hoe karazana fizahan-tany inona no mety hahaliana anao any Espana, satria misy fomba samihafa amin'ny dia.
1 Kolontsaina Turismo
2 Fizahan-tany amoron-dranomasina
3 Fizahan-tany Gastronomic
4 Fizahan-tany divay
5 Fizahan-tany ara-tontolo iainana
6 Dia fitsangatsanganana
7 fizahan-tany ambanivohitra
8 Fizahan-tany Snow
Ny fizahan-tany ara-kolontsaina no iray amin'ireo lehibe indrindra. Amin'ity karazana fizahan-tany ity dia ampidirintsika ilay iray izay miompana amin'ny fahitana tantara, tsangambato, tavela arkeolojika ary tranombakoka. Any Espana isika dia afaka mahita faritra maro miaraka amin'ny tantarany sy ny tranombakoka manokana. ny Guggenheim any Bilbao na ny Prado Museum any Madrid ohatra tsara izy ireo. Ny tsangambato dia manan-danja ihany koa satria mahita toerana toa ny Giralda any Seville, ny Alhambra any Granada, ny Sagrada Familia any Barcelona, ​​ny Katedraly Santiago de Compostela na ny an'i León, ny Alcázar ao Toledo, ny an'ny Segovia na ny Teatra Romanin'i Merida
Fantatsika fa any Espana ny ampahany lehibe amin'ny fizahan-tany dia mitodika mankany amin'ny morontsiraka, satria tsara ihany koa ny toetrandro. Amin'ny faritry ny Mediteraneana dia ahitantsika faritra toa an'i Valencia, ny faritr'i Catalonia ary mazava ho azy ny Nosy Balearic misy ivon-toeram-pizahantany toa an'i Mallorca na Ibiza. Etsy ankilany, misy olona maro mankafy ny torapasika Andalosiana na manapa-kevitra ny ho any amin'ny Nosy Canary, izay mankafy toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona.
Tsy misy isalasalana fa i Espana dia iray amin'ireo toerana manana gastrie tsara indrindra any Eropa ary noho izany ny fizahan-tany gastronomic dia iray amin'ireo manintona lehibe indrindra. Any avaratra dia misy lovia tsara trondro sy hazan-dranomasina. Raha ny marina ny Basque Country, Rioja na Galicia dia iray amin'ireo toerana tianao indrindra amin'ny fizahan-tany gastronomic ho an'ny kalitaon'ny lovia sy ny vokatra avoakany. Ao Andalusia no ahitantsika ny iray amin'ireo toerana tena tianao amin'ny tapas. Ho fanampin'izany, mahazatra amin'ireo toerana ireo ny mahita fety natokana ho an'ny gastronomy, izay manintona mpizahatany maro koa isan-taona, toy ny Seafood Festival any O Grove, Galicia.
Ny fizahan-tany divay dia karazana fizahantany mifandraika amin'ny divay, zavatra iray izay hitantsika koa amin'ny faritra maro any Espana izay malaza amin'ny divay azony. Toerana toy ny La Rioja, Catalonia, Galicia na Andalusia Miaraka amin'ny divain'izy ireo Jerez dia manana antokom-pinoana niaviany izay manintona ny sain'ny mpizahatany an-jatony te-hanatona ny sehatry ny famokarana izy ireo mba hijery ny famiazam-boaloboka sy ny tanim-boaloboka ary hankafy ny traikefa divay amin'ny ankapobeny, ankoatry ny fanandramana na ny làlana.
Ity karazana fizahan-tany ity dia vao haingana, satria ny fizahantany mifototra amin'ny fomba fijery ekolojika dia nipoitra taona vitsivitsy lasa izay. Ny fizahan-tany be dia be dia manimba ny faritra ary matetika dia miteraka fahasimbana ny habaka voajanahary. Izany no antony vaovao fizahan-tany ara-tontolo iainana natao hananganana fahatsiarovan-tena ary mba hahafahan'ireo olona mankafy fomba fiainana ara-tontolo iainana mandehandeha ary mikarakara ny tontolo iainana ihany koa. Ireo hotely dia ekolojika ary ankafizinao matetika amin'ny toerana voajanahary izay ahafahanao mankafy mianatra avy amin'ny natiora nefa tsy manimba azy.
Ireo fizahan-tany dia mifantoka amin'ireo olona mazoto sy mankafy fanatanjahan-tena rehetra. Amin'ny toerana toa ny morontsiraka avaratry ny ranomasina Cantabrian na ny morontsirak'i Andalusia dia mahita torapasika tsara ho an'ny fanatanjahan-tena toa ny surf na kitesurfing isika, miaraka amin'ireo sekoly izay ampiasaina hanombohana amin'ny fanatanjahantena. Betsaka koa ny faritra any Espana izay mila manao fanatanjahan-tena toy ny fitsangatsangana toerana voajanahary, manomboka any Galicia ka hatrany Asturias na Catalonia. Na dia androany aza dia mora ny mahita toerana misy lalan-tongotra vaovao haleha.
Ny fizahantany any ambanivohitra dia iray izay nihalehibe tany amin'ny faritra ambanivohitra sy mangina, any amin'ireo trano nohavaozina tsara mba hankafy izany fomba milamina izany. Ny toerana toa an'i Galicia dia manam-pahaizana amin'ity karazana fizahan-tany ity. Ny fijanonana amin'ny trano ambanivohitra tsara tarehy, voahodidin'ny natiora dia lafo vidy androany handosirana ny fahatairana be ao an-tanàna.
Ity dia karazana fizahantany iray hafa izay hitantsika any Espana amin'ny ririnina. Toerana toa ny Lohasaha Arán any Lleida, ny Puerto de Navacerrada any Madrid, Formigal any Huesca na Sierra Nevada any Granada dia ny sasany amin'ireo toerana izay manolotra toeram-pialan-tsasatra voaomana miaraka amin'ny karazana faritra, toeram-ponenana ary fialamboly ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Karazana fizahantany any Espana